FAQs - Shijiazhuang Yiyan Industrial Equipment Co Ltd.
Yepamusoro yekusimudza pombi
Yakasimba abrasion pombi
Energy yekuponesa slurry pombi
SiC Slurry pombi pombi
Ehe, isu tinoda ese maodha epasi rese kuti ave neinoramba ichienderera shoma odha huwandu Kana iwe uri kutsvaga kuti utengese asi mune zvidiki zvidiki zvidiki, tinokurudzira kuti utarise webhusaiti yedu
Kune sampuli, iyo inotungamira nguva ingangoita mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzedu dzekutungamira dzisingashande neyakafa yako, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvinhu zvedu. Mune garandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kune wese kugutsikana
Hongu, isu tinogara tichishandisa mhando yepamusoro kutumira kunze. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonamira zvinhu Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwezve muripo.
Kwete .83, Xueyuan Road, Yuhua District, Shijiazhuang Guta, Hebei Province